Wasiirka dhalinyarada dowlad gobaleedka konfur galbed oo la kulmay mamulka gobalka bakool:- (Sawiro) - Awdinle Online
Wasiirka dhalinyarada dowlad gobaleedka konfur galbed oo la kulmay mamulka gobalka bakool:- (Sawiro)
February 16, 2020 (Awdinle Online) –Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Ali Dhux Mohamed oo ku sugan degmada ee xarunta Gobalka Bakool ayaa waxaa halkaasi uu kulan kula qaatay Maamulka Gobolka Bakool iyo kan degmada.
Waxaana maanta kulan la qaatey maamulada Gobalka Bakool iyo Degmada Xudur isagoona ka dhageystey xaaladda guud ee gobalka iyo horumarka kala duwan ee ay sameeyeen mudadii koobneyd.
wasiir Ali Dhux Mohamed ayaa waxaa uu kulan la qaatey Gudoomiyaha Gobalka Bakool Maxamed Cabdi Tool, Gudoomiye kuxigeenkiisa Cabdulaahi Maxamed nuur Isnake ayagoona ugu horeyn uu ka dhageystay baahiyaha gaarka ah ee dhanka dhalinyarada iyo ciyaaraha ah ee ka taagan Gobalka Bakool isagoona u sheegay inuu u yimid horumarinta qaybaha kala duwan ee sportska.
Intaasi kadib waxaa uu Kulan la qaatey xubnaha Golaha Deegaanka ee Degmada Wasiirka ayaa balan qaaday in wasaaradiisa ay wax ka qaban doonto guud ahaan hormarinta adeegyada bulshada, gaar ahaan tayayta dhalinta ku nool degmada .
“Waxaan ugu mahadcelinayaa dhamaan bulshada reer Bakool soo dhoweyntii ay noo sameeyeen aniga iyo wafdigeyga, waxaana ballan qaadayaa in aan shaqayn doono sidii wax weyn looga qaban lahaa dhalinyarada ku nool deegnada gobalka bakool iyo guud ahaanba kuwa ku nool deeganada dowlada gobaleedka konfur galbeed somaliya ,ayuu yiri wasiir Ali Dhux Mohamed
Kulamada kadib wasiirka waxaa uu kormeeray habsami usocodka dhismaha Madaxtooyada Koonfur Galbeed ee meel wanaagsan maraysa taasi oo horey ay u dhagax dhigeen Madaxweynaha K/Galbeed iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre., waxaana kormeerka ku wehlinaayey Gudoomiye kuxigeenka Gobalka Bakool.
Ugu dambeyn wasiir ali dhuux maxamed ayaa u sheegay mas’uuliyiinta kala duwan in dowlad gobaleedka Koonfur Galbeed uu wax ka qaban doono dhibaatooyinka kajira Gobolka oo ay ugu weyn tahay tayeyta dhalinyarta sports ah.
Previous articleMaamulka Degmada Dolow Somaali oo la kulmay Saraakiil Ka Socda hay ada WFP:- (Sawiro)
Next articleGudoomiyihii hore ee Degmada Baydhabo oo loo magacaabay xil cusub